बैशाख २६, २०७४ मगलवार १०:३८:१७ प्रकाशित
मेरो उमेर २९ वर्ष हो। हालसालै मेरो विवाह भएको छ। श्रीमतीको उमेर २७ वर्ष हो। हामीले अब कुन उमेरमा बच्चा पाउँदा राम्रो होला? -डीके
- डा. चन्दा कार्की, प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ